Gedo: Boqollaal qoys oo Bakool uga soo barakacay cunno yari oo gaaray Luuq - Radio Ergo
Gedo: Boqollaal qoys oo Bakool uga soo barakacay cunno yari oo gaaray Luuq
Hooyo ka mid ah barakacayaasha oo biyo aroorsi u jeedo/Maxamuud Cabdirashiid/Ergo
(ERGO) – Makay Ibraahim Isaaq oo ah hooyada carruur lix ah, oo agoon ah. waxa ay noloshoodu ku tiirsan tahay raashiin ay ka soo dawarsato qoysaska deggan xerada dadka soo barakacay ee Jaziira. degmada Luuq ee gobolka gedo, kaas oo marna ay weydo marna ay hesho.
Halkan ayey barakac ku timid iyadoo fara maran sadexdii bishan. duruuf cunno la’aan ah ayey uga soo barakacaday deegaanka God-Gamaas oo hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bakool.
Waxaa hoy u ah geed hareera bannaan balse cirifyada kore laga saaray kartoomo. weel maran mooyee wax raashin ahna uma yaalaan guriga, sida Makaay ay u sheegtay Radio Ergo.
“Waxaan cunno dadka halkan jooga ayaan weydiisannaa. hadii aan maalinkii nuskiilo bura aan walaal ka helo waan u karinayaa caruurta. haddii aan ka waayana rubac sokor aan helo ayaan u karinayaa.”
Siddeed cesho ayey soo lugeynayeen iyada iyo carruurteeda si ay u soo gaaraan degmada luuq. deegaanno dhowr ah ayeyna soo habeen dhaxeen. masaafo ka badan 100km ayeyna soo lugeeyeen.
Masago ka yar saddex kiilo ayey carruurteeda usoo karineysay intii ay safarka soo ahaayeen. iyadoo tuulooyinka ay soo mareysay hadba kasoo buuxsaneysay caag biyo ah oo toban qaad ah, si cabitaan iyo cunno karin ay ugu isticmaalaan.
“Nin aan is aqoonay ayaan xoogaa masago kasoo qaatay oo Buurdhuxunle aan la imaaday. jilbaab jeexan ayaan kusoo shubtay oo waddada aan kusoo isticmaaleynay.”
Makaay ayaa sheegtay in ay go’aansatay in caruurteeda ay Luuq ula soo cararto kadib markii uu ka dhamaaday raashinkii ugu dambeeyay, kaas oo ahaa keyd uga haray masaggo uga soo go’day horraantii sanadkii hore beer ay ku laheyd deegaanka God-Gamaas. iyadoo intaa ku dartay in sanadkii 2019-kii ay abaar uga la’deen Ari 28 neef ah oo ay dhaqaneysay.
Qoysas hor leh ayaa wali kusoo qulqulaya magaalada Luuq. waxaana kamid ah qoyska Iidey Aadan Xuseen oo ah hooyada siddeed caruur ah. 48 saac ayey joogaan Luuq.
Waxa ay sheegtay in qoyskoodu uu ku tiirsanaa, Masago uga baxda beer hal higter iyo bar ah oo ku taalla tuulada Malmade oo hoostagta degmada Rabdhuurre, balse uu Ayax ka cunay sanadkii hore. Kadibna ay isku biir sadeen xaalado cunno yari iyo sicir barar dhanka raashinka ah oo ka dhashay go’doon ay Al-shabaab galisay inta badan degmooyinka gobolka Bakool.
“Halkee lagu noolaanayaa jidadkii ayaaba naga xirmay gaadiidna ma galayo. qofka lugtiisa lee mooyee, gaarigii socdana oo la arkana waaba la gubayaa raashinkii oo saran.”
Hadda waxa ay bilowday in cows ay ka soo gurto beeraha ku yaalla hareeraha degmada Luuq ay ku iibiso suuqa balka ee magaalada, si cunno ay ugu hesho Carruurteeda. iyadoo tilmaantay in maalinkii ay hal waqti wax cunaan.
“Haddii alle wax iiga bixiyo labaatan koo ama sodonkoo wixii aan ka helo, madaalkoo ayaan kusoo gadanayaa. isagaas ayaan karsaneynaa. caawa lee ku gaareynaa.”
Illaa 315 qoys oo ka soo barakacay gobolka Bakool ayaa bishan February soo gaaray degmada Luuq ee gobolka Gedo. kuwaas oo iskugu jira Beeraley uu Ayax ka cunay beerihii ay ku tiirsanaayeen iyo danyar ay cunna yaridu saameysay oo ku noolaa tuulooyin dhowr ah oo hoostada degmooyinka Xudur, Waajid iyo Rabdhuurre.
Axmed Xasan Garaar oo ah mas’uulka maamulka Luuq u qaabilsan xeryaha lagu barakacay ee degmada ayaa sheegay in dhammaan qoysaska soo gaaray ay u badan yihiin haween iyo Carruur aad u dayacan oo aan wadan xoolo iyo raashin toonna. xeryaha ay degeen oo kala ah Busleey iyo Jasiira ayuu sheegay in aysan ka helin gurmad dhanka maamulka iyo hay’adaha ah. Isagoo xusay in maamul ahaan aysan hadda waxba u awooodin.
“Dhul waan u haynaa la dejiyo. anaga marka waan awoodi weynay, hay’addo naga caawiyana maanan helin. dadku marka gargaar deg-dega bey u baahan yihiin.”
Xeryaha ay qoysaskan degeen oo aan laga bixin gargaar cunno, waxaa horey ugu noolaa oo wali deggan, illaa 4,800 oo qoys oo ah qoysas ka soo barakacay deegaanno ka tirsan gobolada Gedo iyo Bakool. Kuwaas oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyin xoogsi ah.
Shabeelaha dhexe: Carruur ka faa’ideysnaya waxbarasho bilaash ah iyo quudin